Ibuya ngonyawo olusha iBlood and Water
UKHOSI Ngema no-AmaQamatha abakhuza ibuya kwifilimu ethi Blood and Water osekuvele ukuthi isizini yesibili izokhonjiswa maphakathi nalo nyaka kuNetflix njengoba ukuqoshwa kwayo sekuya ngasemaphethelweni. Isithombe: Sithunyelwe
Nokubongwa Phenyane | February 15, 2021
ABADIDIYELI befilimu eqoshelwa eKapa, iBlood and Water sebememezele ukuthi le filimu izoqala ukubonakala maphakathi nalo nyaka kwiNetflix.
Le filimu eyaba nesasasa ngonyaka odlule, abadidiyeli bayo ngempelasonto bamemezele izindaba zokuya emaphethelweni okuqoshwa kwayo, lokhu bakwenze bememezela nabalingisi abasha kule filimu iningi labo okuyintsha, esencane nedumile kulo mkhakha wokulingisa.
Baveze ukuthi abalingisi balo mdlalo abadala bonke bayabuya, ngakho ababukeli kumele bangakhathazeki.
Esitatimendeni abasikhiphile baveze ukuthi njengoba ababukeli bale filimu bacela isizini yesibili, sebengaqala bazilungiselele ukubona okuphethwe ile yisizini yesibili.
“Kumanje abalingisi balo mdlalo basebenza ngokuzikhandla ukuqopha le filimu sikhuluma nje. Siyajabula ke ukwethulela ababukeli bale filimu intsha esanda kufika emkhakheni wokulingisa nezoqhubeka nokudala olunye uthuthuva kule filimu nakubafundi besikole iParkhurst,” kuchaza isitatimende.
Baveze ukuthi kubalingisi abasha abajoyina lo mdlalo kukhona uLeroy Siyafa ozolingisa indawo kaSam.
“Uzoba ngomunye wabalingisi abazoba sembangweni kwezithinta uthando nozoshukumisa izinto kubafundi besifazane eParkhurst. Asingabazi ukuthi lo mlingisi ungomunye wozothandwa ababukeli bale filimu. Abanye abalingisi kukhona uGreteli Fincham, ozolingisa indawo kaRecee, Katishcka Chanderlal ozoba nguPauline no-Alzavia Abrahams ozoba uZyd,” kuveza isitatimende.
Kubalingisi ababuyayo kubalwa uKhosi Ngema, AmaQamata, Natasha Thahane, Gail Mabalane, Cindy Mahlangu, Thabang Molaba, Arno Greeff, Mekaila Mathys noDillon Windvogel.
Abantu bakuleli bazijabulele izindaba zokumenyezelwa ukuthi sekuya ekupheleni ukuqoshwa kwale filimu futhi izophuma maduzane.